Kalluumeysatada Somaaliyeed Ee Gobolka Mudug Oo Sheegay In Ay Shaqadoodii U Joojiyeen Dhibaatooyin Ay Kala Kulmaan Ciidamada NATO
Saturday, 13 January 2018 10:22
13/1/2018 (BNN) Kalluumeysatadaan ayaa ku shaqo waayey dhibaatooyin ay kala kulmeen Ciidamada NATO ee Xeebaha Soomaaliya u joogo la dagaalanka Kooxaha Burcad Badeedda Soomaalida.
Doomi Kalluumeysi sharci darro ah ka wada Xeebaha Soomaaliya ayee sheegeen Kalluumeysatada in Kalluunka ay soo Jilaabtaan ay kasiiyaan.
Waxaa intaa dheer in ay Biyo ku fureen kolka ay kusoo dhawaadaan Doomaha ay wataan Kalluumeysatada Soomaalida, Maraakiibta askarta NATO.
Ku dhawaad 1,500 qof oo ka Kalluumeysanaye Xeebaha Hobyo kuwa ka agdhaw ee Gobolka Mudug ayaa soo food-saartay Shaqo la’aan kadib markii Agabkoodii la bur-buriyey, halka qaarkoodne ay cabsi soo wajahday.
Cismaan Cabdi Shire Waxa uu Howsha Kalluumeysiga ku jiray 17-sano, Waxa uu sheegay in gudaha Badda ay u gali jireen in ka badan 100-Mile, balse Maanta 1-Mile aysan ugu tallaabi karin Xeebaha Mudug.
Cismaan ayaa sheegay in Gacantiisa Midig ay jabiyeen biyo awood ku socda oo looga soo furay Mid kamid ah Maraakiibta Nato, waxa uuna Tilmaamay in ay jiraan dad ay isla Jallaabanayeen ay waxyeelo kala duwan gaartay.
“Maalin waliba waxaan Kalluumeysiga ka heli jiray $10, waxaan ku maareynaye Qoyskeyga oo ka kooban 10-qof, Shaqo la’aanta isoo food-saaray awgii, ma helo waxyaabo aan ku mareeyo nolosha qoyskeyga oo aan u shaqeynaye 17-sano” ayuu Cismaan Cabdi Shire oo kamid ah Kalluumeysatada shaqo la’aanta ku heysta Degmada Hobyo.
Ciidamada NATO ayaa Xeebaha Soomaaliya u joojo la dagaalanka Kooxaha Burcad Badeedda Soomaalida, oo Marar badan Qafaashay Maraakiib iyo Doomo u badan kuwa Ganacsi.
Waxaase NATO lagu xantaa in Doomo Kalluumeysi ay u safaxaaan Jillaabeysiga Kalluunka dhex Ceegaga Xeebaha Soomaaliya, iyagoona kahor istaagga Kalluumeysatada Soomaalida.
Si lamid ah waxaa jira Dhalinyaro badan oo ay u qab-qabtaan in ay katirsan yihiin ama ay ku tuhmayaan Kooxaha Burcad Badeeda Soomaalida, qaarne ay jirdilo u geystaan, waloow marka dambe ay dib usoo daayaan.
More in this category: « DAAWO: Magaalada Gaalkacyo Oo Ssku Diyaarisay Soo Dhowaynta Madaxwayne Farmaajo Oo Ku Soo Wajahan Iyo Dareenka Shacabka Madaxweynah Maamulka Puntland Cabdi Wali Gaas Oo Sheegay In Maamulkiisu Uu La Shaqeynayo Dowladda Federaalka Somaliya »